‘नेपालका कम्युनिष्ट वास्तविक कम्युनिष्ट पनि होइनन्’ « Pana Khabar
‘नेपालका कम्युनिष्ट वास्तविक कम्युनिष्ट पनि होइनन्’
समय : 10:31 pm
प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिक विश्लेषक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालको राजनीतिक अवस्था र कूटनीति सम्बन्ध, अन्य समसामयिक विषयमा थुप्रै लेखरचना र पुस्तक प्रकाशन तथा सम्पादन गरिसक्नुभएको छ । उहाँ समसामायिक अध्ययन केन्द्र नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्राध्यापक बरालसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पत्रकार राधा चालिसेले गर्नुभएको संवादको सारसंक्षेप र यो सम्बाद हामीले गोरखापत्रबाट साभार गरेका हौ ।
तस्बिर: गोरखापत्र अनलाईन
-वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
–के यस्तो प्रवृत्तिले साँच्चै नेपालको विकासमा सहयोग पुग्छ त ?
-अहिलेको वाम गठबन्धन चुनावी स्वार्थका लागि मात्र हो कि दीर्घकालीन रूपमा नै हुने देख्नु हुन्छ ?
–सत्ता साझेदार पार्टी सत्ता पनि नछोडी प्रमुख विपक्षी दलसँग यसरी मिल्न जानुलाई राजनीतिक शास्त्रीको हिसाबले कसरी हेर्नुभएको छ ?
-वाम एकताले लोकतन्त्र नै समाप्त हुन लाग्यो । सर्वसत्तावादी तर्फ मुलुकलाई लैजान खोजियो भन्ने नेपाली काँग्रेसको टिप्पणीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
-अहिले भएको वाम गठबन्धन साँच्चै पार्टी एकतामा गयो भने के हुन्छ ? के नेपालमा दुई वा तीन वटा पार्टी मात्र बन्न सक्लान् त ?
-अहिलेको गठबन्धन बाह्य शक्तिको प्रभावका कारण भएको हो कि नेपालको आवश्यकताले नै प्रेरित गरेको जस्तो लाग्छ ?
–आगामी चुनावी परिणाम कस्तो आउला भन्ने तपाईंका विश्लेषण छ ?
-नयाँ पुस्ताको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
-तपाईं कूटनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो दशकमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?
-हालै काठमाडौँमा भएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकलाई कसरी हेर्नुभएको छ । १९५० को असमान सन्धिको संशोधन होला त ?
नेपाल–भारतको यो असमान सन्धिका बारेमा विगत ५० वर्षदेखि कुरा चल्दै आएको छ । वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण कतिपय कुरामा खुम्चिनुपर्ने हुँदोरहेछ । खुम्चाइमा सधैँ सानो र कम शक्तिशाली मुलुक नै पर्ने हो । १९५० को सन्धिका केही प्रावधान नेपालका दृष्टिकोणले असमान छन् । नेपालले असमान सम्झेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि भारत पक्षको आफ्नै ‘रिजर्भेसन’ छ ।
उच्च तहको राजनीतिक तहमा बलियोसँग कुरा राख्न सकेमा मात्र यो परिवर्तन हुने हो भने नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले केही वर्षदेखि एउटा एक्ससाइज गर्दै आएको छ । यसलाई उच्च राजनीतिक तहले मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ । यसमा म त्यति आशावादी छैन ।
मधेसी,जनजाती लगायतको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक: बाबुराम भट्टराई